Cunsuriyiin fara badan oo weeraray masaajidka Stockholm | Somaliska
Muslimiinta ku nool Stockholm ayaa cabsi weyn la soo daristay habeenkii isniinta ka dib markii 50 cunsuriyiin soo xiratay dhar madoow ay weerar ku qaadeen masaajidka weyn ee Stockholm ee ku yaala Medborgarplatsen. Saacadu markay ahayd 22:43 xiligaas oo Muslimiintu ay isku diyaarinayeen salaada cishaha ayaa 50 cunsuriyiin ah ay soo weerareen dadkii ku sugnaa dibada masaajidka.
Waxay masaajidka ku tuureen waxyaabo, iyagoo dadka qaar gacanta ula tagay isla markaana telefoonada ka qaatay. Dadkii Muslimiint ahaa ayaa goobta ka kala cararay. Booliska ayaa sheegay in dhacdadaan ay tahay mid naceyb ka dhan Muslimiinta ku dhisan. Iyagoo sheegay in laga yaabo dadka weerarka geystay in ay yihiin taageerayaasha kubadda cagta.
Ilaa hadda boolisku cidna ma soo xirin, iyagoo baaritaan ku sameynaya kaamirooyinka ku xiran masaajidka si loo aqoonsado dadka weerarka soo qaaday.
Ma ahan markii ugu horeysay ee la weeraray masaajidkaan iyo masaajida kale ee ku yaala daafaha Sweden. Iyadoo horay masaajidka albaabada laga soo galo lagu sawiray calaamada naaziyiinta Hitler.
bahda Somalisk sida aad qormadan u qorteen waa si cabsi galin ku dheehan lakin sidaa wax ka badala Cunsuriga Bahal ma aha waa dad inaga oo kale ah Hadii ay dad cibaadesanaya ay weerar ku qadaan waa la Iska dhicinayaa qof walba in u is difaaco xaq ayuu u leyahay Sverige waa demokrati ee dad yaan la cabsi galinin
bahda Somalisk sida aad qormadan u qorteen waa si cabsi galin ku dheehan lakin sidaa wax ka badala Cunsuriga Bahal ma aha waa dad inaga oo kale ah Hadii ay dad cibaadesanaya ay weerar ku qadaan waa la Iska dhicinayaa qof walba in u is difaaco xaq ayuu u leyahay Sverige waa demokrati ee dad yaan la cabsi galininin si dagan qormada u qoro ka daaya xamaasada
Abdi Rizaaq Mahemed Farajeer says:
xamaasad maaha ee say wax u jiraan ayaa laga hadlayaaa runrii way weerareen dadkaa ama ba miskiidka wax sax ah uunbayka hadleen saxaafadu run ayaay sheegayaan wlo su aal aanku waydiiyee ma waxaadka xuntahay saxaafada ku fafinaysa warka swedan miyaad ka xumaatay taasi waa su sale
June 17, 2016 at 01:36
Waa canbaraynaa waxase sacabooley noqday dadkii mesha ku cibaadaysanayay xiligan oo lagu jiro Ramadan in layiraahdo 50 qof ayaa masajid soo weeraray Waa shacabnimo in ay ku shamuumaan aa larabay oo ilkaha kala baxaan cunsuriyiinta